I-17-Hydroxyprogesterone powroate powder (630-56-8) HPLC =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / 17-Hydroxyprogesterone powroate powder
Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw inokubaniswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-17-Hydroxyprogesterone powroate powder (630-56-8), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-17-Hydroxyprogesterone powroate powder, Phantse iintsana ze-500,000 zizalwa kuqala kwi-United States ngamnye ngonyaka. Ukuzalwa kwangaphambi komntwana (PTB), okanye ukuzalwa ngaphantsi kweeyure ze-37, ubeka iintsana ezisengozini enkulu yokufa kwaye yimbangela ebangela ukukhubazeka kwexesha elide kubantwana. Ukongezelela, iindleko zezempilo ze-PTB ezichaphazelekayo zihlawula inkqubo yezempilo yase-US ngaphezu kwe-$ 26 yezigidigidi ngonyaka. Ukukhusela i-PTB kubaluleke kakhulu ekukhuthazeni impilo yexesha elide kunye nophuhliso lweintsana kwilizwe lonke.
I-17-Hydroxyprogesterone caproate powder ividiyo
I.17-Hydroxyprogesterone i-caproate powder isiseko Abalinganiswa:
igama: I-17-Hydroxyprogesterone powroate powder
II. Umjikelezo we-17-Hydroxyprogesterone
Amagama eKhemikhali: I-17-Hydroxyprogesterone powroate powder
Amanye amagama: 17-OHPC, 17P, hexanoate
2. I-17-Hydroxyprogesterone i-caproate powder Ukusetyenziswa:
Isidakamizwa i-17-alpha hydroxyprogesterone caproate yi-progestin ye-synthetic injectable. Kuye kwabonakaliswa ngokusebenzayo ekukhuseleni okanye ekulibazisekeni kokuzalwa kwangaphambi kokuzaliswa kwe-singleton kwabasetyhini abanembali yokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa kwangaphambili.1 Emva kokufumaneka ngokubanzi njengeziyobisi ezingabonakaliyo, ngoku iguqulelwe inguqu (Makena; AMAG Pharmaceuticals) ebiza malunga ne-100 amaxesha angaphezu kweyesiqalo. Ngomhla kaFebruwari 4, i-2011, i-KV Pharmaceutical Company (ekugqibeleni ibizwa ngokuba yiLumara) yafumana imvume evela kwi-US Food and Drug Administration ukuvelisa nokuthengisa iMakena, eyenziwe izithako ezifanayo ezifunyenweyo kwi-original formulation formulation. Ukuvunyelwa kwakuquka inkcazo yezobisi zezintandane kwaye wanika i-KV Pharmaceutical Company amalungelo anelungelo lokwenza uMakena, onokubangela inxaxheba kwixabiso layo eliphezulu. Kule sifundo, sasebenzisa i-database yesibango se-inshurensi ukuhlola imiqathango ye-17-alpha hydroxyprogesterone caproate phakathi kwe-4000 ekhutshwe ngokurhwebayo (kungekhona i-Medicaid) abafazi abakhulelweyo. Injongo yethu yayikuqonda ukusetyenziswa, iindleko, kunye neziphumo zegama kunye neenguqu ezixubileyo zeziyobisi.
3.Yintoni umlinganiselo we-17-Hydroxyprogesterone powroate powroate?
250 mg kanye ngeveki nganye (imihla yonke ye-7); qalisa unyango phakathi kweeveki ze-16, iintsuku ze-0 kunye nee-20 iiveki, iintsuku ze-6 zesigxina; qhubeke kude kube ngeveki ye-37 (ngeeveki ze-36, iintsuku ze-6) zesigxina okanye ukuhanjiswa, nantoni na kuqala.
Sasiqhuba isilingo esiphezulu esingaboniyo, esinokulawulwa kwe-placebo esibandakanya abasetyhini abakhulelweyo abanembali ebhaliweyo yokunikezelwa kwangaphambili kokuqala. Abafazi babhalisiwe kumaziko eekliniki ze-19 kwi-16 ukuya kwii-20 iiveki zokubambisana kunye ne-random eyabelwe yiziko eliphambili leenkcukacha, kwi-2: 1 ratio, ukuba ifumane ijoyiki yeveki ye-250 mg ye-17P okanye ijoyiki yeveki ye-placebo ye-inert; iilenki zaqhutyelwa kude kube yilethwa okanye kwiiveki ze-36 zesigxina. Isiphumo esiphambili sasihanjiswa kwangaphambili ngaphambi kweeveki ze-37 zesigxina. Uhlalutyo lwenziwe ngokwemigaqo-nkqubo yokuphatha.
Iziganeko ze-base-line ze-310kazi kwiqela leprogesterone kunye nabafazi be-153 kwiqela le-placebo babefana. Ukwelashwa kunye ne-17P kunciphise kakhulu ingozi yokunikezelwa kweeveki ze-37 ezinqiniweyo (i-incidence, i-36.3 ekhulwini kwiklasi ye-progesterone kunye neepesenti ze-54.9 kwiqela le-placebo; umngcipheko wecala, i-0.66 [i-95 yepesenti yexesha lokuzithemba, i-0.54 ku-0.81]), i-35 ipesenti kunye ne-20.6 yeepesenti; i-30.7 ye-0.67 yexesha lokuzithemba, i-95 kwi-0.48], kunye nokuhanjiswa ngaphantsi kweeyunithi ze-0.93 zesigxina (ipesenti ze-32 kunye ne-11.4 yepesenti ; umngcipheko wentsapho, i-19.6 [i-0.58 yepesenti yexesha lokuzithemba, 95 ku-0.37]). Iintsana zabasetyhini baphathwa nge-0.91P babe neqondo elincinci kakhulu lokungena kwi-enterocolitis, ukungena kwegazi, kunye nesidingo sokongeza oksijini.
Iinjongo zeeveki ze-17P zenze ukuba kuncitshiswe kakhulu kwinqanaba lokuhanjiswa kwangaphambili kwezilwanyana phakathi kwabasetyhini ababengumngcipheko ophezulu wokunikezelwa kwexesha lokuqala kwaye banciphisa ubunzima beengxaki ezininzi kwiintsana zabo.
4.Iphi i-Cortexolone 17-Hydroxyprogesterone powroate powder isebenza?
I-17--hydroxyprogesterone caproate (17-OHPC) yindlela yokwenziwa kweprogestogen. Umzimba womntu awuyi kutyumba i-molecule. Elinye igama lokubamba igama elithi "hexanoate," elingu-ester elivela kwi-hexanoic (okanye i-caproic) ye-asidi. Ifom ye-17-OHPC iboniswa kuMzobo. Abanye oogqirha baye bathi i-17-OHPC ifumaneka kwiibhokhwe. Oku kubonakala kungumntu, kuba ukuchongwa kwale molekyuli kumzimbeni womzimba, izicubu zeebhokhwe, okanye nayiphi na enye into ephilayo ayikwazi ukuqinisekiswa kwincwadi yophando.
Impembelelo ye-17-OHPC ebude besibeleko kwizigulane ezineembali ze ≥ 1 zokuzalwa kwangaphambili ezabelwe ukufumana i-17-OHPC kunye neqela lokulawula elingalawulwayo. Akukho mahluko kwimiqathango yobude bomlomo wesibeleko ngokugqithiseleyo kwexesha yabonwa kubafazi abafumana i-17-OHPC. Ngokwahlukileyo, i-progesterone yamanzi yanciphisa izinga lokunciphisa umlomo wesibeleko kwizigulane ezineembali zokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa okanye ukunciphisa intsapho.
I-17 i-alpha-hydroxyprogesterone caproate (17P) yindlela yokwenziwa kweprogesterone eye yaboniswa ukunciphisa ukuphindaphinda kwe-PTB yabasetyhini abanezintlu zengqungquthela ezinembali yangaphambili. Abasetyhini abanembali yangaphambili ye-PTB banamathuba okuba babe nolunye usana oluqala ukulinganisa nabasetyhini abangenayo. Ngokuqhelekileyo enqunywe oogqirha, i-17P ilawulwa ngeeyunithi zangeveki eziqala kwiiveki ze-16-24 de kubekwe. Izifundo zibonisa ukuba ukulawula i-17P kumfazi ofanelekileyo kunciphisa ithuba lokuba ne-PTB enye ngepesenti ze-33. Kunyaka ngamnye, malunga nango-30,000 abafazi abakhulelweyo bafumana isiqinisekiso kwaye bajongwa njenge-17P.
Ukunciphisa umngcipheko wokuzalwa kwangaphambi kokubeleka kwabasetyhini abanokukhulelwa okungabonakaliyo kunye nomlando we-singleton wokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa kwangaphambili (okhethwe yiziyobisi zeNtsana nge-FDA kulolu hlobo).
Uphuculo olwenziwe ngokubhekiselele ekuphuculeni kwinqanaba labasetyhini abanikezela kwii-<37 kweeveki zesigxina; inzuzo yeklinikhi ngqo (umz., ukuphuculwa kokusweleka kwe-neonatal nokufa) akusekwa.
Ukhuseleko kunye nokuphumelela kuboniswe kuphela kwabasetyhini abanokuzalwa kwangaphambili; ayilungiselelwe ukusetyenziswa kwabasetyhini abanamaqela amaninzi okanye ezinye izinto ezinobungozi bokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa.
I-ACOG icebisa ukubonelela nge-progesterone ukukhusela ukuzalwa kokuzalwa kwangaphambili kwabesetyhini abane-pregnancy pregnancy kunye nokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa kwangaphambili kwiiveki ze-37 zesigxina ngenxa yokusebenza kwangaphambili komsebenzi okanye ukugqithwa kwangaphambili kweembrane.
I-6.17-Hydroxyprogesterone powroate powder:
7.17-Hydroxyprogesterone powroate powder Ukupheka:
I-8.17-Hydroxyprogesterone powroate powder Ukuthengisa:
I-9.I-17-Hydroxyprogesterone powroate powder Ngaba unayo nayiphi na imiphumo emibi?
Iprogesin yokusebenza; iveliswe ngokuchithwa kwe-17α-hydroxyprogesterone, i-metabolite yemvelo yeprogesterone, ene-acroic acid.
Unomsebenzi onamandla weprogestogenic; kubonakala kuvelisa ixesha elide elide kwaye linamandla ngaphezu kwe-endometrium kuneprogesterone.
Akubonakali ukuba ne-androgenic, antiandrogenic, isrogenic, okanye i-glucocorticoid.
Inkqubo yesenzo ekunciphiseni umngcipheko wokuzalwa kwangaphambi kokuzalwa okungaziwa
III. I-17-Hydroxyprogesterone powroate powder HNMR
IV. Indlela yokuthenga i-17-Hydroxyprogesterone powroate powder ku-AASraw?